P3 UHD Gudaha Gudaha LED Video Wall
Nooca alaabta: P3
Cabir: 576 * 576MM
p2 / p3 Muuqaal yar oo Muuqaal LED ah
Maaddaama ay si dhakhso leh u kobcayaan dhaqaalaha, dadku waxay ka walaacsan yihiin in la kobciyo noloshooda ruuxiga ah, TV-ga yar iyo LCD ma dabooli karaan baahidooda mar dambe. Waxqabadyo iyo madadaalo badan oo madadaalo ah ayaa la abaabulaa maalin kasta, sida naadiyada DJ, xafladaha, riwaayadaha, dhacdooyinka kulanka shirarka. Muujin kiro weyn oo hogaaminaya ayaa ka dhigaysa dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo dhacdooyinka iftiiminaya midabkeeda midabka leh ee muuqaalka fiidiyowga, dhalaalka sare, wejiga daawashada ballaaran iyo aragtida, astaamaha tooska loo heli karo ee baahinta. MPLED waxay diirada saareysaa bixinta tayo sare leh gudaha / banaanka kirada hogaamisa ee laga soo bilaabo P3 ilaa P10 ee loogu talagalay macaamiisha warbaahinta & madadaalada warshadaha, waxay ka sameeyeen mashaariic badan oo guul leh aduunka oo dhan.
1. Si aad u muujiso sawirro cad oo cad oo qaraar sare leh.
2. Isku midab wanaagga midabka ayaa si fiican u xaliya dhibaatada mosaicada.
3. Tikniyoolajiyad casri ah oo wax soo saar ah ayaa hubineysa tayada iyo nolosha nololeed ee darbiga fiidiyowga LED-ka.
4. Darbiga fiidiyowga ee loo yaqaan 'LED video wall' wuxuu korsadaa barnaamijyo caan ah oo fiidiyow lagu ciyaaro si loo fududeeyo howlaha nidaamka.
5. Way fududahay dayactirka, oo wuxuu hagaajin karaa hal dhibic si loo badbaadiyo kharashka dayactirka.
6. Saamayn fiican ku leh sawirrada iyo waraaqaha labadaba sababtoo ah adeegsiga tikniyoolajiyadda 'pixel' dhabta ah
Iyada oo leh laambado aad u dhalaalaya oo LED ah iyo qolof balaastig ah oo tayo sare leh.
Si fudud loo rakibo loona kala furfuro
Dayactirka laambadda keliya
Ku wadida LED leh qaab joogto ah oo joogto ah, iftiin isku mid ah, iyo awood koronto yar
Qalabka pixel waa 3mm, kaas oo leh 64 * 64 pixels. Pixel kasta wuxuu ka kooban yahay 1R1G1B.
P3 shaashadda elektaroonigga ah ee barnaamijka elektiroonigga ah ee loo yaqaan 'P3-full-color' waxaa lagu heli karaa qaabab kala duwan: leydi, afargeesle, qalooca, wareegsan iyo qaabab kale oo caado ah.
P3 shaashadda elektaroonigga ah ee midabkeedu yahay midabka midabkiisu dhammaystiran yahay ayaa taageeri kara kaararka xakamaynta isku mid ah iyo kaararka xakamaynta asynchronous isla waqtigaas; xitaa haddii ay dhacdo xakamaynta kumbuyuutarka, wali si caadi ah ayey u soo bandhigi kartaa.
Ku rakibida qaab-dhismeedka birta ah: gudaha P3 LED muujinta midab-buuxa waa qaab bir bir ah oo fudud, kiimikada birta rivet kiimikada saxanka birta ah ayaa loo isticmaalaa sidii qaab-dhismeed taageero oo u dhigma qaybta iyo qaybta tiirarka, iyo qaabka birta ah ee la soo bandhigayo wuxuu ku xiran yahay bir bir ah oo go'an saxan.
Nidaamka shaashadda midabka midabka leh ee P3 LED gudaha wuxuu u shaqeeyaa si deggan oo la isku halleyn karo, wuxuu leeyahay awood ka hortag fara-gelin xoog leh, wuxuuna si joogto ah u shaqeeyaa in ka badan 72 saacadood. Nidaamka xakamaynta hawlgalka softiweerku waa adeegsi saaxiibtinimo oo sahlan in la shaqeeyo.
Xiga: P3.91 Dhacdooyinka Dibadda Kireynta Wareegtada Wareegga LED
P2 Muuqaalka Pixel-ka Yar ee Bandhigga Gudaha Gudaha
P2.5 Gudaha Gudaha LED Video Wall
P0.9 P1.25 Gudaha Gudaha LED Screen Screen